Ukudityaniswa: Ukuhanjiswa kweSithembiso soBuqu | Martech Zone
Umdibaniso: Ukuhambisa ngeSithembiso sobuNtu
NgoLwesibini, Aprili 20, 2021 NgoLwesibini, Aprili 20, 2021 UJason Cottrell
Isithembiso sokwenza ubuqu sisilele. Sele kuyiminyaka sisiva malunga nezibonelelo zayo ezintle, kwaye abathengisi abafuna ukungenisa kuyo bathenge kwizisombululo ezinamaxabiso kunye nezobuchwephesha, kodwa ukufumanisa emva kwexesha kakhulu, uninzi lwayo, isithembiso sokwenza ubuqu asinto ingaphezulu komsi nezipili.
Ingxaki iqala kwindlela umntu ajonge ngayo. Ibekwe njengesisombululo seshishini, yenziwe ngokusebenzisa iilensi zokusombulula iimfuno zeshishini xa ubuqu bokwenyani kufuneka bube malunga nomntu (ukuba oko kuvakala kucacile, kungenxa yokuba kunjalo). Ukufaka igama lomntu kwi-imeyile akuboneleli ngeemfuno zabo. Ukubalandela ngeenxa zonke kwi-intanethi ngentengiso yento ababeyijongile kwindawo yakho ayizisebenzisi iimfuno zabo. Ukulungelelanisa umxholo wephepha lakho lokufika nako bakhonze iimfuno zabo, kodwa hayi ukuba le nkqubo iyixhasayo inemingxunya yedatha kunye nolawulo lomxholo olungalunganga, imiba eqhelekileyo exhasa uninzi lwezinto eziyimfihlo ezithintela amashishini akhubeka.
Nganye yezi ndlela ifana nentengiso yedijithali efanayo nenkohliso yexabiso eliphantsi, kwaye abathengi bakho ababoni kubo kuphela, bayabacaphukela. Kodwa kukho ilizwe apho ulwazi-lwedatha, amava afanelekileyo enikezela ngexabiso elongezekileyo kubathengi, bebanceda ukuba bafumane, benze uphando, kwaye bathenge izinto zabo ngokulula kwizitishi ezizilungeleyo.
Rhoqo, iibrand zibandakanya isicwangciso sobuqu ngaphambi kokuba babe kwimeko yokuphumelela. Iphupha elimenyezelayo leebhasikithi ezinkulu kunye nokuphinda abathengi bashiya inyani ebuhlungu: ngaphandle kwendlela eyomeleleyo yedatha kunye noyilo lwedijithali olunokuxhasa amava omnichannel adibeneyo, iphupha konke oko kuya kuba njalo. Kodwa akufuneki ibengale ndlela. Ukwenza umntu kungaphumelela.
Ke singasuka njani kumava ashiya abathengi baziva bengenamdla (okona kulungileyo) siye kubo okunxulumana nento abayifunayo xa befuna nini kwaye njani? Ngokudityaniswa kwetekhnoloji kunye nesicwangciso.
Yenza Umsebenzi Wedatha
Okokuqala nokuphambili, amashishini kufuneka ahlele idatha yawo. Qaphela ukuba khange nditsho Abathengisi Kufuneka ukuba idatha yabo ihlelwe kodwa amashishini xa ewonke. Abathengisi abaninzi baneenkcukacha ezicocekileyo nezicwangcisiweyo. Kuyafana nakubaphuhlisi bemveliso, amaqela eempawu, kunye necandelo ngalinye lombutho elinokufikelela kwisilayidi sedatha.
Ngamava abathengi kuphela angahlali kwizilo ezicocekileyo nezicocekileyo; yenzeka kuwo onke amanqanaba kwaye ngamaxesha onke. Ukulindela ukuqonda malunga nokuphinda ujonge amaphulo okwazisa ngamava abathengi ngumdlalo wobudenge. Ukulungiselela umntu ukuba asebenze, kufuneka yakhiwe kuwo onke amava, hayi isilayi esinye saso.
Oko kuthetha ukuba ishishini lakho kufuneka lifumane umbono omnye womthengi kuyo yonke indawo yokuthinta. AmaQonga eDatha yaBathengi (IiCDP) zilungile koku, kunye neqabane elithembekileyo njenge Uhlobo lweMyplanet inokukunceda ubone ukuba yeyiphi i-CDP efanelekileyo kwiimfuno zakho kwaye ikuncede uyiphumeze. Ngokwaphula idilesi zesebe lakho, uya kuqala ukufumana umbono opheleleyo wendlela amava akho abathengi abukeka ngayo, ukusuka esiphelweni kuye esiphelweni. Ukwenza ubuqu namhlanje kuthengisa ngamabali abaxhasi ngokulandelelana ixesha elininzi, kodwa inyani ayifane ithi ngqo.
Uya kudinga ukuxhasa idatha yakho yexesha lokwenyani (RTDizicelo. Nge-RTD, uyakuqinisekisa ukuba amava ngokwawo ayacwangciswa-ukuqinisekisa ukuba ulwazi ngemveliso luhlaziyiwe kwaye nemisebenzi yokukhangela isebenza ngokusemandleni-kodwa yinxalenye ebalulekileyo yokwakha indlela esebenzayo yomntu emgceni. Izenzo zabaThengi kwisitishi esinye kufuneka zikwazi ukubangela uphawu lwentengiso kulo naliphi na ijelo, kubandakanya nele babekhona, kwaye oko kunokwenzeka kuphela nge-RTD.
Ukuzisa idatha eyongezelelekileyo yeshishini kunokukunceda uthathe amava inyathelo eliya phambili, nawe. Ukuqonda ukuthengisa ngokujikeleza amagama ophando kunokunceda ekuchongeni kungekuphela nje awona magama aqhelekileyo abathengi bakho abawasebenzisayo ukufumana iimveliso ezinqwenelekayo kodwa kunye namagama ahambelanayo abanxulumana neemveliso, eziza kuluncedo xa ukulungele ukwenza amava kunye neengcebiso ngemveliso .
Kwaye okokugqibela, kubalulekile ukuba ubeke imveliso yakho kwindawo enye. Ukuqinisekisa amava umthengi afana ne-Intanethi kwinto abebenokuyigcina, kwi-app, besebenzisa i-kiosk ezimeleyo, bethetha ne-Alexa, okanye nayiphi na enye into enokuthi uphawu lwakho lunxibelelane nabaphulaphuli bakho kuyo, kuya kufuneka nganye yezi ndawo zokudibanisa ziqhagamshelwe kwiziko ledatha eliphakathi. Kwakhona, ezantsi emgceni xa ukulungele ukwenza uhambo lomthengi olwenziweyo, idatha ehambelanayo iya kuba ngumqolo waloo mava.
Ukuhambisa idatha ngokukuko kuya kunceda ukwenza amava abe mkhulu, kodwa ukwenza idatha isebenze ngokugqibeleleyo kwaye uqinisekise ukuba uhambisa amava okunkqonkqoza kuwo onke amajelo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo amava akho. Uyilo olungenantloko (ukudibanisa isiphelo sakho samava esiphelo kwisakhelo sokuphela) ayisiwo wonke umntu, kodwa kwisakhelo seemodyuli lolona khetho lufanelekileyo lokugcina isantya sotshintsho lwetekhnoloji.
Ngaphandle kwetekhnoloji yohlobo oluphambili eyenza ukuba icandelo ngalinye lamava libe nzima, kunokuba nzima ukuwathatha la manqanaba ukuya kwinqanaba elilandelayo ngeokhestra. Ukuhlawulisa uhambo lomthengi olusuka kunxibelelwano lwentetho olubazisele kwi-brand yakho, kumava akwi-Intanethi apho bafunda ngakumbi ngeemveliso zakho, kwaye ekugqibeleni kuthengiso lwe-in-app kunzima kakhulu ukwenza ukuba usebenza nge-monolithic back -end engadlali kakuhle nabanye.
Idityaniswa yiMyplanet inikeza isikhokelo seemodyuli esikuvumela ukuba wenze uninzi lwamava akho e-ecommerce. Ukuhambisa iipateni zorhwebo ezingqinisisiweyo kunye netekhnoloji ye-best-in-class, Composable ikuxhobisa ngezixhobo zokwenza isisombululo esinyani se-omnichannel esinokuphila ngokwesithembiso sokwenza ubuqu: idatha eqhagamshelwe ngokupheleleyo ukukunceda ubone umxholo owufunayo abathengi; ulawulo lomxholo oluguquguqukayo ukuze ukwazi ukuhambisa loo mxholo kumacandelo abaphulaphuli abafanelekileyo; kunye nesiseko seemodyuli zokwakha kunye neshishini lakho, ukuziqhelanisa namathuba amatsha entengiso njengoko evela.
Ii-Monoliths zinendawo yazo, kwaye ukuba iminikelo yabo iyenzeka ukuze ihambelane neemfuno zakho ngokugqibeleleyo, uya kuba semgangathweni. Kodwa njengoko imeko inguquko iguquka, kunzima kakhulu ukubona ukuba isisombululo se-monolithic siza kuqhubeka ukubonelela ngayo yonke into ekufuneka ibrendi iphumelele, kwaye siyinike elona nqanaba liphezulu likho kwintengiso. Isakhono sokukhetha kunye nokukhetha izisombululo eziza nesakhelo seemodyuli kuthetha ukuba xa kukho into eshenxela ishishini lakho-into entsha ofuna ukuyifumana, ijelo elitsha ekufuneka ube yinxalenye yalo-itekhnoloji exhasa ishishini lakho inokutshintsha ngokufanelekileyo.
Jonga ukonyuka kweendawo zentengiso kule minyaka 2-3 idlulileyo. Iindawo zentengiso zinokunikela ngexabiso lokwenyani labathengi. Abathengi banokufumana yonke into abayifunayo kwindawo enye kwaye, njengebhonasi eyongeziweyo, banokufumana amanqaku okunyaniseka okanye bagcine kwiindleko zokuhambisa ngaxeshanye. Kwaye bavula amathuba ezinto ezinje ngeengcebiso ezongezelelweyo zemveliso ezinokuthi zonyuse amava abo emveliso okanye zenze lula amava abo okuthenga, zombini zibonelela ngexabiso elinokubakho kubathengi. Isibonelelo seshishini kule teknoloji similiselwe kwisibonelelo somthengi kwaye sinxibelelana ngqo nendlela efanelekileyo yokwenza umntu-sikho isizathu sokuba iindawo zentengiso zisuswe kutshanje.
Kodwa ukuzama ukuzisa isisombululo kwindawo yentengiso kwindawo yokuqala kunokuba ngumceli mngeni. Nayiphi na itekhnoloji entsha iyakuthatha umsebenzi ukuze ilunge, kodwa ukwazisa itekhnoloji entsha kwimeko ye-monolithic ecosystem isenokungabikho. Isisombululo ngasinye sinabasebenzi kunye nexesha kunye nemali echaphazelekayo. Ukuguquguquka kwemodyuli, eyona ndlela ilungileyo yohlobo lokunikezela, nangona kunjalo, kuthetha ukuba lonke elo xesha kunye nomsebenzi kunye nemali ayizukulahleka emgceni xa kufuneka uhlengahlengise ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
Ukwenza umntu akukhange aphile kude kube ngoku, kodwa kuyenzeka. Kufuneka nje ukuba sihlakaniphe malunga nendlela esiyisebenzisa ngayo itekhnoloji eyenzayo. Sidinga ukuseta isiseko esomeleleyo sokusetyenziswa kwedatha kuba isekela yonke imiba yokwenziwa komntu, kwaye kufuneka siqinisekise ukuba uyilo oluthembele kuthi ekuxhaseni indlela yokwenziwa komntu luyakwazi ukulixhasa. Okona kubaluleke kakhulu, kufuneka sigxile kwizicwangciso ezijolise kubasebenzisi. Nasiphi na isicwangciso sobuchule esibeka ishishini elifunayo ngaphambi kweemfuno zomsebenzisi sikulungele ukusilela kwaye sisilele.
Cela iDemo eDityanisiweyo
tags: CDPukudityaniswaIplatifomu yeDatha yoMthengieCommerceubuqu becommerceiplanethi yamomnichannelNgokwezifisoqhinga lomntuidatha yexesha lokwenyaniUlwenziwo lwexesha lokwenyanirtd
UJason Cottrell nguMsunguli kunye ne-CEO ye Uhlobo lweMyplanet, studio yoyilo lwesoftware egxile ekudaleni amaqonga amava edijithali abathengisi be-omnichannel, iinkampani ze-ecommerce, i-telecom, igrosari kunye nolunye uphawu lwehlabathi.
Ukunyanzelwa komfanekiso kunyanzelekile ekukhangekeni, kwiselfowuni, kunye nokuGuqulwa kokuSebenza